Nzira yekuona peas? | Ehupfumi Zvemari
Pasi pezita rekuda kuziva rechicharros pane zvakavanzika zvakateedzana zvekuchengetedzeka zvakanyorwa pamusika wemasheya zvinochengetedza hunhu hwakatsanangurwa kwazvo. Aya makambani madiki-emabhodhi ane mashoma kwazvo emari uye ndiwo anotarisirwa mashandiro evatangi vanofungidzira zvakanyanya mumisika yemari. Kwavanotarisana ne yakaderera vhoriyamu yekutora iyo yavanotakura munzvimbo dzese dzekutengesa. Kusvika padanho rekugadzira yakakwira kwazvo mutengo kusiana. Pamusoro peavo vakagadzirwa mu mamwe maitiro yezvikwereti.
Kana paine humwe hunhu hunotsanangudza zvakajeka hunhu hunozivikanwa sepea pea, ndiko kushomeka kwavo kukuru. Inova yakanyanyisa nemusiyano wakanyanya kutaurwa pakati pemitengo yayo yepamusoro uye yepasi, iyo inogona kupfuura 10%. Naizvozvo, inokodzera kwazvo intraday mashandirondiko kuti, kunoitwa panguva imwechete yekutengesa kutora mukana nemafambiro echisimba aya. Iko kwaunogona kuwana mibairo yemari isingatombo goneswa mune yakasarudzika tsika dze misika yemari.
Spanish equities izere nemakambani ehunhu uhu. Zvese zviri zviviri maererano nemusika unoramba uchienderera mberi uye kunyangwe kune iyo Imwe nzira Stock Market (MAB). Nevamiriri vanozivikanwa vakaita saSniace, Ercros kana Inmobiliaria Colonial, kungodoma mienzaniso mishoma. Mitengo yayo yakaderera chimwe chinhu chinotsanangura mapea. Nekuti kazhinji kukosha kwayo kuri pasi peyuniti yuniti. Nekudaro, izvi hazvireve kuti iwo akachipa masheya. Chaizvoizvo zvinopesana, muzviitiko zvakawanda kukosha kwayo kuri kudhura.
1 Chicharros: sei kushanda navo?
2 Nematambudziko emari
3 Iwo ndiwo musoro wenyaya dzeguhu dzese
4 Iwo mashoma kwazvo maitiro
5 Ivo havasi pasi pekuongororwa
Chicharros: sei kushanda navo?
Mukirasi ino yemhando dzakasarudzika, ma mechanics ekudyara akasiyana zvakanyanya zvine chekuita nehunhu hunofungidzirwa kunge hwakajairika. Kutanga, izvo zvinoitirwa mashandiro emari munguva pfupi. Hazvishamisi kuti iwe unomhanya mungozi yekunamatira munzvimbo dzavo. Izvo izvo ipapo zvinonetsa kwazvo kubuda mavari. Kune rimwe divi, zvinoda kufamba kwakanyanya kuti utore mukana wekumira kwekukwira kwavo, nekuti iwo ekudzika anokurawo munzira imwechete. Iwo akanyorwa makambani anogona kusimuka gumi muzana muchikamu chimwe chete chekutengesa nekukurumidza pavanokwanisa kusiya imwechete muzana zuva rinotevera.
Mapaizi akakosha, kune rimwe divi, akaomesesa kushanda. Chete kana uine chokwadi ruzivo mukushanda Iwe unogona kuve uchida kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire pamwe nezvimwe zvivimbiso zvekubudirira Chero zvazvingaitika, haufanire kunongedza mashandiro kune iyo yepakati uye yakareba nguva. Nechikonzero chakakosha uye icho ndechekuti iwe unogona kukochekerwa pazvinzvimbo zvavo. Ndokunge, vanomaka mitengo iri kure kwazvo nemirairo yekutenga. Nekuda kweichi chiito, iwe unenge usisina sarudzo kunze kwekuita lousy kutengesa oparesheni kana, zvinopesana, pamwe mira kwenguva refu kusvikira iwe wagona mutengo wawakavhura iwo nzvimbo mune aya akakosha kukosha.
Chimwe chezvinhu zvakasarudzika zvemakambani aya anosanganisirwa mukati medzidziso inoshamisa iyi ndeyekuti vanowanzove nezvinetso mumabhizinesi avo. Izvi mukuita zvinoreva kuti ivo vanowanzo kuve nematambudziko mukuvapa mari. Kazhinji nemhedzisiro yebhizinesi isina kunyanyisa kuvhiringidza uye nekudaro haipe vimbiso kune vashoma nevepakati varimi. Rimwe rematambudziko ake makuru rinobva pakuti mabhizinesi ake haana kugadzikana uye ane matambudziko akawandisa ekuenda kumberi. Kunyangwe nenyaya yekuti ivo vanoteverwa nemamwe makambani kune imwe mhando ye oparesheni yekutengesa pakati pavo. Ivo vanotongwa nemiparamende iyi uye izvi zvinoita kuti kushomeka kwedudziro mumakotesheni avo kuve kweanogara achiwedzera iwo muhupenyu hwavo hwese.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti mapea anowanzo tenderera kumabasa ekufungidzira nevashambadzi vadiki nepakati. Uine kuganza kusagadzikana Izvo zvinovatadzisa kubva kugadzirisa pane imwe tsika. Nekuti pakupera kwezuva icho chakakosha ndiwo mutengo wavanomaka muchikamu chekutengesa. Kwete zvakare mukati mezvaunotarisira. Kusvika kune icho chakanyanya kuomarara kuvandudza zano rekudyara. Nekuti kana aya maratidziro achizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti vanofamba nekumanikidza, sezvawakaona mumakore achangopfuura.
Iwo ndiwo musoro wenyaya dzeguhu dzese
Chimwe chinhu chaunofanirwa kutarisira kana uchizoshanda neizi ndechekuti runyerekupe nezve mamiriro avo emari anowanzoitika. Hazvishamise kuti, muchikamu chikuru chemapea, mitengo yacho inoenderana nezvakataurwa izvi. Iko mune dzakawanda zviitiko ivo vasina hwaro kana zvirinani vane zvishoma kuenderana. Izvi zvinoreva kuti sekungofanana nemasheya avo anomuka nekukurumidza, iyo nguva runyerekupe urwu rusina kusimbiswa, mitengo yavo inodonha nekudonha. Kusvika padanho rekuti iwe unogona kusiya akawanda emauro munzira. Iwo akanyanya njodzi maitiro ekushandisa, kunyanya kana iwe usina ruzivo mune urwu rudzi rweakanyanya mashandiro.
Mari yavo yemugove inotungamirwa nemhando idzi dzemashoko mumisika yemari. Chinhu chisingaitike, semuenzaniso, nemachipisi ebhuruu einosarudzika indekisi yeSpanish equity, iyo Ibex 35. Mupfungwa iyi, iwo hunhu hunopfuura nekuda kwemhedzisiro yavo, vanotora nekariro ivo vanogadzira pakati pevatengesi. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvikuru nei maitiro avo asiri echokwadi. Iko runyerekupe rwakakosha kupfuura maakaundi ebhizinesi anounzwa makota ese egore.
Iwo mashoma kwazvo maitiro
Chimwe chinhu chekuwongorora kutsanangura hunhu hunonyanya kuzivikanwa sechicharros ndechekuti iwo haana kusimba. Izvi zvinorevei chaizvo? Zvakanaka, une mamwe matambudziko ekupinda nekubuda munzvimbo dzavo. Mupfungwa yekuti ivo hazvienderane nezvido zvako kazhinji. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti mazita mashoma kwazvo anotengeswa mumusika. Izvi zvinogona kukonzeresa kuti iwe usakwanise kutengesa zvikamu zvako pamutengo waunoda uye semhedzisiro yehunhu uhu, unogona kuita oparesheni yakaipa mumisika yemari.
Izvo zvakare zvakaomarara kubvuma kudyara kwemari yakawanda yemari. Kana zvisiri, pane kudaro, uchafanirwa kuita akawanda mashandiro emari shomana yehupfumi kuti vagone kuchinjika pamitengo iwe yaunoda kutenga yavo migove. Iko kusagadzikana kwausina iwe mune mamwe maitiro sezvo uchigona kupinda nekubuda panguva yaunoda. Sezvauri iwe kuita mumitengo senge Banco Santander, BBVA, Iberdrola kana Gasi Natural. Hazvishamise kuti huwandu hwevatengi nevatengesi hwakaderera zvakanyanya mumapizi.
Ivo havasi pasi pekuongororwa
Kune rimwe divi, aya marudzi etsika atiri kutaura nezvayo haateedzerwe neiyo broker kana vamiririri vezvemari. Naizvozvo, iwe unenge uine shoma ruzivo rwehunyanzvi nezve ivo nekusave nekutevera-kune kwavo shanduko mumisika yequity. Ivo zvakare havafarire kusanganisa mapotifoti ekudyara nemari uye izvo zvinobvumidza chete vatengesi kutarisa pazvinzvimbo zvavo. Kubva pane ino mamiriro, ivo vakatorwa izvo zvinonyanya kugadziriswa pakuumbwa kwemitengo yavo. Nemazita mashoma iwe unogona kushandisa kukosha kwavo, nekuchinja-chinja kunogona kusvika 10% mumaminetsi mashoma.
Kana iwe ukaona shanduko yayo pamusika wemasheya uchaona kuti huwandu hwayo hwekutengesa hwakanyanya kushomeka, mune zvimwe zviitiko zvisinganyanyi kukosha. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvemitengo yavo zvakare pane dzimwe nguva hazvichinjiki kwemaawa mazhinji kana kunyange nguva dzekutengesa. Kusvika pakuti iwe unogona kupererwa nekakufamba kudiki munzvimbo dzawo. Iko hakuna kana chero kufarira kubva kune vadiki nepakati varimi. Kungofungidzira chete kunoita kuti vafambe neimwe nzira kana imwe.
Kana chinangwa chako chiri chekudyara mune aya akakosha tsika kubva zvino zvichienda mberi, iwe unofanirwa kuziva kuti iri rakanyanya boka. Iko iko ichokwadi kuti iwe unogona kuwana mari yakawanda mukuita kwako, asi zvakare ikusiire iwe chakakosha chikamu chekudyara. Beyond iyo zano iwe yauchazotsvaga mune yekudyara. Chichava chikonzero chinogutsa kwazvo chekuti iwe usape mari inodhura kwazvo yezvinhu zvako wega. Kwete pasina, njodzi dzakanyanya kukwirira kune avo ezvimwe kuchengetedzeka pamusika weSpanish wemusika. Kunyangwe ivo vari vanozivikanwa kwazvo pakati pevashambadziri nekuda kwemipiro yatakatsanangura kare.
Iwe chete ndiwe unozokwanisa kutora danho rekuti zviri nyore here kuti usarudze mapea senzira yekudyara. Kuongorora njodzi dzese dzauchamhanya nadzo kana pakupedzisira ukasarudzira vamiririri veSpanish equities. Nekuti kana usiri investor ane fungidziro profil, zvichave zviri nani kusiya kuyedza uye kunongedza kwako mashandiro kune akatsiga zvakanyanya tsika pamusika wemusika. Zvirinani unenge wakadzikama uye unozokwanisa kuita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire nenzira inogutsa yekudzivirira zvaunofarira. Ndokunge, shure kwezvose, izvo ndezvei nezve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Nzira yekuona peas?
Nzira yekuita invoice?
Kukosha kweCash Flow mune hutano hwemari